नेपाल आज | के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ?
केही समयपछि म विवाह गर्ने योजनामा छु। पहिलो यौन सम्पर्कलाई लिएर के–के कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ? के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? - आर, चितवन